२१ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाका कारण विस्थापित भएकाहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन मूल्य...
२१ साउन, बेनी । रघुगङ्गा गाउँपालिका-८ पात्लेखर्कका २६ वर्षीय रेशम पुन अग्ला पहाड चढेर मह शिकार गर्न सिपालु हुन् । वर्षको दुई याममा हुने भिर माहुरीको मह शिकारका लागि पुन निर्विकल्प भिरौटे (भिरमा चढेर मह काढ्ने) हुन् । अग्ला पहाड...
नेपालबाटै इन्टर्नसिप गर्न नपाए आन्दोलन गर्ने चीनबाट फर्केका विद्यार्थीको चेतावनी
२१ साउन, काठमाडौं । कोरोना महामारीका बेला चीनबाट फर्केका एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले नेपालबाटै इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । नेपालबाटै इन्टर्नसिप पूरा गर्न पाउने व्यवस्था नगरे आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । चीनमा अध्ययनरत मेडिकल इन्टर्नसिप विद्यार्थीहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै...
कुनै पनि व्यक्तिको शारीरिक रुपान्तरणको लागि तपाईंको कामुकताले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । हर्माेनको स्तरमा आउने गिरावटले न्यूरोलोजिकल र परिसञ्चरणको काममा ठूलो असर गर्ने गर्छ । जसले गर्दा योनीको दुखाइ जस्ता यौन समस्याहरु निम्तिने गर्छ । यस्ता शारीरिक परिवर्तनहरुको अक्सर...
भक्तपुरमा केटीएम र हस्कभर्ना मोटरसाइकलको शोरुम एकै ठाउँमा
हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी अन्तर्गतको केटीएम र हस्कभर्ना मोटरसाइकलको आधिकारीक वितरक टाइम्स अटो इन्टरप्राइजेजले डिलरशिप शोरुम भक्तपुर ठिमीमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । टाइम्स अटो इन्टरप्राइजेज केटीएम र हस्कभर्ना मोटरसाइकलको थ्री इन सर्भिस शोरुम संचालनमा ल्याएको हो । दुवै ब्राण्डहरु बिल्कुलै...
विमलालाई उहाँकै इच्छाअनुसार मुख्यमन्त्री निवास पुर्‍याएको हुँ : भूमिश्वर ढकाल
२१ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभाका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सभा सदस्य विमला खत्री वलीकै राजीखुसीमा दाङबाट मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुर्‍याएको दाबी गरेका छन् । एमालेमै फर्किएको विज्ञप्ति पनि उनकै इच्छाअनुसार सार्वजनिक भएको ढकालको भनाइ छ । प्रदेशसभा...
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन वैज्ञानिक छ ?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधिवत् रूपमा १६ पुस, २०५५ सालमा हवाई विभागबाट सहज निर्णय प्रक्रिया र छरितो संगठनको कल्पना गरेर स्थापना भएको हो । तर, अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजनको सँघारमा छ । कसैको चाहना यो पनि होला कि...
भदौ २३ पछि अहिलेको कार्यसमितिको वैधानिकता सकिन्छ : पौडेल
२१ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भदौ २३ पछि अहिलेको केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकता सकिने दाबी गरेका छन् । उनले संवैधानिक रुपमा पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले भदौ २३ पछि पार्टीको वडादेखि केन्द्रीय तहसम्मको...
२१ साउन, बैतडी । सडक भासिदा पाँच दिनदेखि अवरुद्ध जयपृथ्वी राजमार्ग पुनः सञ्चालनमा आएको छ । लगातारको वर्षाले पाटन नगरपालिका-८ झौलेकमा सडक भासिदा गत आइतबारदेखि राजमार्ग अवरुद्ध बनेको थियो । भासिएको सडक भत्काएर सडक किनारबाट पर्खाल लगाएपछि आजदेखि राजमार्ग सञ्चालनमा...
२१ साउन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना महामारीका बेला जोखिम मोलेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीचको आपसी समन्वय अभाव र मतभेदका कारण दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणका बेला संक्रमितको...
गरीबलाई नि:शुल्क बिजुली दिने तयारी अन्तिम चरणमा छ : मन्त्री भुसाल
२१ साउन, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसालले गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई नि:शुल्क विद्युत दिने तयारी निष्कर्षमा पुग्न लागेको बताएकी छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीहरुसँगको छलफलमा मन्त्री भुसालले आफूले गरीबीको रेखामुनि रहेका...
भारतीय नागरिकबाट सुन बरामद प्रकरण : थप एकजना पक्राउ
२१ साउन, काठमाडौं । सिनामंगलबाट एक किलो ८ सय ६६ ग्राम सुन बरामद प्रकरणमा थप एक जना पक्राउ परेका छन् । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, बानेश्वरले काँडाघारीबाट रोकश राईलाई पक्राउ गरेको एसपी कृष्ण कोइरालाले अनलाइनखबरलाई बताए । उनका अनुसार वैदेशिक...
२१ साउन, काठमाडौं । करेन्ट लागेर पोखरा र बैतडीमा गरी तीन जनाको मृत्यु भएको छ । पोखरा महानगरपालिका–२५ मिलनचोक बस्ने ३४ वर्षीय मृगसिंह नेपालीको करेन्ट लागेर बुधबार दिउँसो मृत्यु भएको हो । हेम्जा सापकोटा चोकस्थित निर्माणाधीन घरको पिल्लरको रड बुन्ने...
२१ साउन, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीको हेलिउद्धार हुँदै आएकोमा अब हेलिकोप्टरबाट समेत उद्धार थालिएको छ । समिट एयरले बुधबार सुर्खेतबाट दुई कोभिड बिरामीलाई मेडिकल उडानमार्फत काठमाडौं ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार एक क्याप्टेन र...
२१ साउन, काठमाडौं । सरकारले यही साउन २५ देखि ३२ गतेसम्म ‘खोप सप्ताह’ मनाउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले साउन २५ गतेदेखि खोप सप्ताह मनाउने जानकारी दिएका हुन् । यस अवधिमा जापानबाट आउने ८ लाख र...
२१ साउन, रोल्पा। निर्वाचनताका सबैका नारा थिए ‘भरपर्दो टेलिफोन सेवा’। घण्टौँ उकालो चढेर डाँडाबाट फोन गरेर हैरान उनीहरुलाई सो नाराले आकर्षित मात्र गरेन, भोट हालेर जनप्रतिनिधिलाई जिताए पनि । केही वर्ष प्रक्रियामा अलमलिएका जनप्रतिनिधिले बस्ती बस्तीमा भरपर्दो टेलिफोन सेवाका लागि...
नेपाल एयरलाइन्सको निजीकरण रोक्न माग गर्दै कर्मचारीले गुहारे प्रधानमन्त्री
२१ साउन, काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गर्न सरकारले थालेको पहल खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री गुहारेका छन् । नेपाल एयरलाइन्स भित्र सक्रिय ९ वटा ट्रेड युनियनका नेताहरुले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै निगमलाई निजीकरण गर्ने...
विमला वलीको स्पष्टीकरण : मुख्यमन्त्री निवासमा ‘बन्धक’ बनाइयो, जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइयो
२१ साउन, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री वलीले आफूलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा ‘बन्धक’ बनाएको बताएकी छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी वलीले आफू माओवादी केन्द्रमै रहेको बताएकी छन् ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई खगराजको प्रश्न : कोरोना खोपको मूल्य कति हो ?
२१ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले कोरोना खोपको मूल्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँग गरेको छलफलमा सांसद अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रको ढुकुटी गएको छ, मोर्डनाको...
२१ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंको बौद्ध टुसालमा एनआईसी एसिया बैंकको एटीएम मेसिन फुटाउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–१ भोटेचौर घर भई काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६ नारायणटार बस्ने ३४ वर्षीय विनोद चौलागाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको...